2018 Sinocare ke, intsebenziswano kunye YUELU NGQUNGQUTHELA 2018-Inkampani news-Sinocare
Iimpawu zentengiso ezizayo
Intsebenziswano ye-2018 Sinocare kunye ne-YUELU SUMMIT 2018
Ixesha: 2019-08-16 hits: 15
Kukho intetho ethandwayo kumzi mveliso we-Intanethi wase China, oko kukuthi, "kukho i-Wuzhen empuma kunye ne-Yuelu entwasahlobo", ebonisa ukuba i-Wuzhen ineNgqungquthela ye-Intanethi yeHlabathi kwaye kukho i-Intanethi ye-Yuelu kwiNtwasahlobo. Injongo yokuqala yeNgqungquthela ye-Yuelu ye-Intanethi kukumema oosomashishini be-Hunan kwi-Intanethi kunye nabanye oosomashishini ukuba badibane kwaye batshintshiselane phantsi kweNtaba yeYuelu ekuqaleni kuka-Epreli kunyaka ngamnye. Ukuza kuthi ga ngoku, ingqungquthela ibanjwe ngempumelelo kangangezihlandlo ezine, iba ngumnyhadala we-Intanethi wefowuni kunye ne-icon ye-icon.
UKUVULA I-CEREMONY YUELU SUMMIT 2018
Ngo-Epreli 3, i-Intanethi ye-Yuelu Summit ye-2018 yabanjwa njengoko yayicwangcisiwe. Umxholo wale ngqungquthela yayingu “Bulumko boBukrelekrele obuKhulayo”. Yenziwe yi-Changsha yeSizwe ye-Hi-Tech Development Development Zone kwaye yaxhaswa liSebe lePropathi leKomiti yePhondo yeHunan, iOfisi yoLwazi yeIcyber yePhondo, I-Hunan yezoqoqosho kunye neKhomishini yoLwazi, iHunan Xiangjiang indawo eNtsha, iHunan Radio kunye nesikhululo seTV. ezinye iiyunithi. Iimali ezinkulu ze-Intanethi eziqokelelwa eChangsha ukwakha iqonga lishishini nge-intanethi kunye nokukhuthaza ukudibana okunzulu kwe-intanethi kunye nomzi mveliso. Umsitho wezempilo okhethekileyo phantsi komxholo we "Smart Blueprint, Health Mission" usingathwe yi-Sinocare Inc. ukhathalelwe phantsi kolindelo olukhulu.
Intsebenziswano yamaqela amaninzi ukwenza umzobo weWIT120
Ingxelo yengqungquthela yeqela leshumi elinesixhenxe yeCongress yenza intetho ecacileyo kwinxalenye ethi "Ukuphucula inqanaba lokhuseleko nokuphila kwabantu, ukuqinisa kunye nokuphuhlisa ulawulo lwentlalo" esithi "Ukuphumeza isiCwangciso seMpilo seTshayina" iya kuba sisicwangciso esiphambili selizwe lethu. Ngokusekwe kumxholo "Wempilo eBanzi" kunye "nomgaqo-nkqubo wezempilo weqela elitsha", ingxelo iye yatyhila ngokubonakalayo kwezempilo kweli xesha litsha.
ICANDELWANA LOLAWULO LWEZEMPILO LWEZEMPILO NENGCWANGCISO LOKWENZIWA KOMSEBENZI WASE-HUNAN LOKUVUNYELA IINTETHO KWIintlanganiso
Njengenxalenye ebalulekileyo yokwakhiwa kweTshayina esempilweni, uthotho lweetekhnoloji ezintsha kunye nezixhobo ezitsha, ezinje ngedatha enkulu, i-computer yelifu, ubukrelekrele bokuzenzela, kunye nonyango olusimahla lwezonyango, njl njl, ngokuqhubekayo kuphuhliswa kwaye kuveliswa, kwaye iiprojekthi zokwakha ezempilo ziqhutywa kakhulu. Ixabiso U-Long Kaichao, uSekela-Mlawuli Wezempilo kunye neKhomishini yoCwangciso loSapho yePhondo laseHunan, wagxininisa ukuba kufuneka sithathe umoya we-Nineteenth Congress njengesikhokelo sokuphuhliswa kwale foram, sibonisa indaleko yemisebenzi kurhulumente, kwaye silawule umbono obalaseleyo wobulumko kunye ukhathalelo lonyango phantsi kwexesha elitsha. Ngokusekwe kule mpilo ibanzi, iSinocare Inc. ijolise ekubonakaliseni impumelelo yesayensi kunye netekhnoloji kwinzululwazi yezonyango. Ngeengxoxo ezininzi, sizibophelele ekufumaneni iindlela apho ubuchwephesha be-WIT120 bunokuqaliswa, kunye nokudibanisa ikamva labaphilayo kunye nabaphilayo, kunye nokunceda impilo-yonke elungileyo yokwenza impilo impilo yendalo iphela.
ISALONI YOKUGQIBELA EBALASELEYO
Iindwendwe, ezibandakanya uNjingalwazi Zhou Zhiguang, Unobhala weKomiti yeqela lesibini kwiSibhedlele iXiangya kwiCentral University, uLi Shaobo, uSihlalo we-Sinocare Inc., uZhang Fan, uMsunguli kunye noSihlalo we-Ansun Angel, uLiu Quan, uSihlalo we-Zhixiang Health Technology (Beijing ) I-Co, i-Ltd. kunye noMsunguli we-Injini ye-Zhimai Pharmacy, u-Li Chengzhi, umsunguli kunye ne-CEO ye Beijing Dnurse Technology Ltd., njl njn, bathathe inxaxheba kwi-salon enobunonono yezempilo. Baqala iingxoxo ezifudumeleyo ngomxholo "wokudityaniswa kunye nokuziqhelanisa nolawulo lweSifo se-Intanethi kunye noLawulo lwezifo ezingapheliyo" ukuphonononga nokwakha inkqubo yonyango entsha kunye ne-ecology entsha kwixesha elizayo.
U-LI SHAOBO, USIhlalo we-SINOCARE INC., WAYENZA I-WIT120 KWI-MEDIA
Phakathi kwazo zonke iziganeko ezizodwa zeNgqungquthela yeYuelu, izinto zobuchwepheshe obuphezulu zenze umsitho wezeMpilo oKhethekileyo wahluka. Oku akuphelelanga nje kwifuthe le-WIT120 Iforamu ye-Yuelu Summit kumzi mveliso, kodwa komeleze nomfanekiso ngqondweni weli shishini lokuthengisa. Ukongeza, ivakalise umbono wesayensi kunye netekhnoloji yokwenza ubomi obungcono, kwaye idale umxokelelwano ochanekileyo wezoqoqosho ohlanganisa oorhulumente, iinkampani zemveliso, imibutho yezonyango kunye nabantu.
Imvakalelo yokwenza umsebenzi kunye netekhnoloji ikhulisa icandelo lezempilo
Ngexesha lokuvela kwetekhnoloji, i-WIT120 iye yangena kwizigaba ezininzi zophuhliso, kwaye imisebenzi karhulumente nayo iyavela. Kodwa imithombo yabo yoqobo isasele singumdla wethu wokuqala kwaye sigcina uthumo lwethu luzinze engqondweni ukunceda icandelo lezempilo labantu ngenzululwazi kunye netekhnoloji kunye nehlombe le-mission ephilayo yeChina ukuyenza iqhubekele phambili. Njengeshishini lobugcisa obuphezulu elizibophelele ekusebenziseni itekhnoloji yokuziva bio ukuphanda, ukuphuhlisa, ukuvelisa, ukuthengisa iimveliso zokuchonga ngokukhawuleza kwezifo ezinganyangekiyo, iSinocare Inc. iyaqhubeka nokwenza iinzame zokuphucula i-China China.
I-DU HUI, UMLAWULI WENKCAZO KUNYE NOPHUHLISO LWEZOQHINGA LWEZOBUCHULE BENKONZO YENKCUBEKO.
Ukuze kuncediswe iikhemesti ukuba zikhonze abaguli ngcono kwaye zilawule izifo ezinganyangekiyo, i-Sinocare Inc. yazisa ngemodeli evuthiweyo e-United States kuthathelwa ingqalelo yabanikeli yezixhobo ukwenza "IKlinikhi eMncinci" yekhaya ukunceda abaguli ukuba babeke iliso kwizifo zabo. kwaye ufumane iinkonzo ezihambelanayo. Umxholo weenkonzo zokutsala ngamehlo i- "Sinocare Minute Clinic" igubungela isifo esingapheliyo senkqubo yokuchongwa kwesalathiso kunye nokufumanisa i-glucose, iyonke cholesterol (TC), lipoprotein cholesterol ephezulu (HDL-C), uxiniseko lwepopoprotein ephantsi (LDL-C). ), i-glycerin trimyristate (TG), BMI kunye nexabiso le-uric acid. Inokufumana ngokukhawuleza izikhombisi zesifo esingapheliyo ngaphakathi kwemizuzu kwaye incede abaguli ukuba bahlaziye, bahlole, baqikelele kwaye bafundise, kunye nokubonelela ngolawulo lwedatha kunye nezisombululo ezilungiselelwe umntu, njl.
UPROFESA YANG WENYING WAYENZA ULWAZI NGOKUTHETHA NGEZOBUCHULE METABOLIC KUNYE NEMPILO YESizwe
Kule seshoni iQinzekileyo yezeMpilo, iinkokeli zoqeqesho zachaza ukuba kufuneka sidibanise ithiyori kunye nokuzilolonga ukuphuhlisa ishishini. Unjingalwazi kunye nomhlohli we-postdoctoral uYang Wenying, uMlawuli weSibhedlele saNgaphakathi seTshayina-Japan Friendship kunye nogqirha oyintloko we-Endocrine kunye neZiko leSifo se-Metabolic se China-Japan Friendship Hospital, babelane ngolwazi olukhethekileyo ngezifo ze-metabolic kunye nempilo yesizwe. Njengengcali eyaziwayo yekhaya ye-endocrine, uNjingalwazi uYang Wenying unolwazi olunzulu lwesifo seswekile. Uzibandakanya ikakhulu kwizifundo zezifo nakwimeko zeswekile, isifo se-metabolic kunye nezinye izifo e China. Unjingalwazi uYang ufumana izibonelelo ezizodwa ezivela kwiBhunga likaRhulumente kwaye uphumelele amabhaso amaninzi. Ukwangusihlalo ohloniphekileyo we-Chinese Diabetes Society kunye nomongameli olilungu le-Asia Diabetes Society.
Ushishino kunye neendwendwe ezihlanganisiweyo zibonisa okufezekisiweyo kunye nezikhokelo zophuhliso kushishino kubathathi-nxaxheba. UZeng Renxiong, uSihlalo kunye noMphathi oMkhulu weHonghua Capital Group Co, Ltd. kunye neHonghua International Medical Holdings (Iqela) Co, Ltd., banikela intetho ephambili “kwiinkonzo ze-Intanethi zenkonzo ye-Intanethi ngononophelo lwezempilo kunye nokulwa indlala”. U-Yuan Hong, ingcali ye-State Council Special imvume, uchwephesha oyintloko weProjekthi yeSizwe yokuDala iziyobisi kunye neProjekthi ye973, kunye noSekela Mongameli weSibhedlele i-Xiangya Hospital ye-Central South University, wabelane ngamava akhe kulawulo loxinzelelo lwegazi ngexesha le-intanethi . UNjingalwazi Yi Fayin, ingcali yamachiza odumileyo waseTshayina, uMlawuli weThala leencwadi leYunivesithi yaseHunan kwiMveli yeMveli yaseTshayina, kunye noMlawuli weZiko loLondolozo lweNdalo likaZwelonke le-Jiuzhitang babelane ngamava akhe kwi-Intanethi kunye nolawulo lwe-TCM.
Iingcaciso-ntetha ezintle kunye neentetho azibonisanga kuphela ukuphononongwa kunye nokufezekiswa kwamaziko ezonyango, amashishini, kunye namashishini aphantsi kobunkokheli bakarhulumente, kodwa ke kubonise nesicwangciso sophuhliso salo mveliso kunye nekamva lenkampani. Abameli abaninzi benkomfa ngokudibeneyo bavavanye indlela yokuphuhliswa kwe-WIT120.
Ukudibanisa "Izibonelelo zoNyango + zoLuntu" nge love
Ukunceda abantu bubulumko bemveliso yezonyango, kwaye kunjalo nange-WIT120. Iindlela ezibonakala zibanda zesayensi nezobuchwepheshe zifuna izibonelelo zabantu bonke. Kwicandelo le "Reader" lesiganeko esibalulekileyo sezeMpilo, abasebenzi be-Sinocare Inc. benze impumelelo ye-WIT120 kwintlalontle ngendlela yokufunda ngendlela enothando, ethe yaba ngumbala wosuku.
Abafundi baquka abantwana abanesifo seswekile yohlobo lwe-1 kwiNkampu ye-Xiangya Kangle kunye namalungu osapho, kunye "neengelosi ezimhlophe", abongikazi beCandelo le-Endocrinology kwisibhedlele i-Xiangya yeSibini seYunivesithi yase-Central South. I-Sinocare Inc. iququzelele ukuhlangana kwe-Xiangya Kangle Camp iminyaka emininzi kwaye inikezelwe ekugxileni kwizigulana ezinesifo se-mellitus sohlobo lwe-1. Amavolontiya eSinocare nawo eze kumsitho. Ukongeza ekuboneleleni ngesimahla iimitha zeglucose yegazi yabantwana abanesifo seswekile uhlobo lwe-1, banethemba lokuqhuba imfundo elungelelanisiweyo kunye nonyango lwabantwana ngemisebenzi yesisa efana neXiangya Kangle Camp ukuqinisekisa ukuba abantwana abaninzi bakhula ngokwasempilweni kwaye bonwabile. Ndiyabulela ngokunyuswa kwe-WIT120, aba bantwana bathandekayo banokuzaliswa ngethemba kunye nokukhanya njengabantwana abaphilayo. Abantwana abamsulwa, iingelosi ezimhlophe kunye namavolontiya eSinocare afunda ngokuvakalayo Ndinephupha kwaye wonke umntu owayekho apho wachukumiseka kakhulu.
UNjingalwazi uZHOU ZHIGUANG, UMQESHI WESITHUTHA SEXIANGYA HOSPITAL, WABONISA IINJONGO ZAKHE ZOLAWULO LOKULUNGISELELA I-DIABETES MELLITUS TYPE 1
“Ngokuqhubela phambili koluntu kunye nokuphuculwa konakekelo lwezonyango, uhlobo lwesifo seswekile i-1 ifumene ingqalelo ethe kratya kuluntu nakubasebenzi bezonyango, kodwa isekude kwanele. Impilo yabantwana ngokwasemzimbeni nasengqondweni ifuna ukuqonda ngakumbi kunye noncedo oluvela kuzo zonke iindlela zobomi. Apha, ndiyathemba ukuba uluntu kunye neenkampani zixhalabile ngohlobo lwesifo seswekile i-1 kunye nohambo olutsha lophuhliso lobuchwephesha kwezonyango kunye nenkqubela phambili kunye nokuhanjiswa kothando akunakuze kuyeke! ”Xa besabelana ngolawulo olupheleleyo lwesifo seswekile sohlobo lwe-1, uNjingalwazi uZhou Zhiguang wabhena.
UKUGCINWA KWEXESHA LOKUGCINWA KWENXENYE YOKUGQIBELA KWENZIWA XAANGYA KANGLE CAMP
I-WIT120 yenza ukuba ubomi bube ntle kwaye isisa senza umhlaba ube yindawo engcono. Kokubili okulindelweyo kunye nosukelo ekufuneka silusebenzise uthando ukuchaza ubhalo oluhle lobomi ukwenza ulonwabo lube nathi ngamaxesha onke. Le seshoni yeMpilo eNgcwele iqukunjelwe kunye nomsitho weminikelo ofudumeleyo. I-Sinocare Diabetes Charable Foundation inike umnikelo kwi-Xiangya Kangle Camp enika ukhathalelo kubantu abanesifo seswekile ngohlobo lwe-XELUMX yeswekile. Abameli beenkampani ezithathe inxaxheba, kubandakanya iSinocare Inc., badibanise iminqweno yabo kwaye banethemba lokuba inkonzo yoluntu esempilweni, enje ngeKangle yaseKangle, izakuba ngcono kwaye ibe ngcono. Babenethemba lokuba "I-Medical + Charity" inokufumana ingqalelo ngakumbi ebantwini, kwaye abantu abavela kuzo zonke iindlela zobomi, bekunye nabanye abathathi-nxaxheba, bazakuzibandakanya kule misebenzi yentlalontle yoluntu.
Iphepha elidlulileyo: Ingqungquthela yokuqala yabathengisi beSinocare igcinwe ngempumelelo eDelhi
Iphepha elilandelayo: I-Sinocare yaya kwi-2018 Middle Medlab East kwi-Dubai